Maxkamadda ciidamada Soomaaliya oo xukun dil ah ku riday saddex xubnood oo katirsan Al-Shabaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaxkamadda ciidamada Soomaaliya oo xukun dil ah ku riday saddex xubnood oo katirsan Al-Shabaab
May 30, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamadda ciidamada Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah xukun dil ah ku riday saddex xubnood oo katirsan Al-Shabaab.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Xasan Nuur Shuute ayaa sheegay in saddexda xubnood ay ka dambeeyeen qarax ka dhacay hoteel ku yaala magaalada Muqdisho.
Hotel Naasahablood, ayaa la weeraray 28-dii Oktoobar sanadkii hore, ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay qaadday weerarka.
Go’aanka maxkamadda ayaa racfaan laga qaadan karaa, sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada.
April 6, 2018 Saddex maleeshiyo oo Al-Shabab katirsan oo lagu dilay duqeyn diyaaradaha Mareykanku ay ka geysteen gobolka Jubbada Dhexe
December 28, 2017 Ugu yaraan afar dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn ay qaadeen Mareykanku oo ka dhacday meel u dhow Muqdisho
Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland oo u safray magaalada Buuhoodle
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ku wajahan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan madaxtooyada. Madaxweyne Cabdiweli ayaa ka qeybgali doona aaska Fiqi Bashiir Cabdulle Codweyn kaasoo kamid ah [...]
Soomaaliya oo sheegtay in aysan marna gorgortan ka geli doonin muranka badda kala dhaxeeya Kenya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan marna gorgortan ka geli doonin muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya. Wasiir dowlaha arrimaha dibada Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Khayr oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in marnaba [...]